Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo » Inkulumbuso yothando yoLwandlekazi lwaseIndiya
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • inkcubeko • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeLuxury • iindaba • Imitshato yothando • Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
Amanani athetha ngokuvakalayo kwi-archipelago yase-Indian Ocean, enabantu abaphantse babe ngama-5,000 XNUMX abakhetha ukwenza iSeychelles umtshato wabo okanye indawo yabo yokutshata ukuza kuthi ga ngoku kulo nyaka-ibonisa indlela iSeychelles ehlala iyindawo ekhethwayo kubahambi abavela kwihlabathi liphela.
Ukusukela ekuvuleni kwakhona imida yayo, amanani abatyeleli anyuse ukubuyela kwiipesenti ezingama-50 zamanqanaba angaphambi kwe-COVID.
Abantu abasandul 'ukutshata babalisela phantse umntu omnye kwabali-1 abatyelele kwiiSeychelles Islands ngo-10.
Ngaphandle kwesi sifo, i-Seychelles iye yazomeleza njenge-honeymoon capital ye-Indian Ocean.
Ukubonisa ukubuyiswa okuhle kukhenketho lwamazwe aphesheya, ezi ndaba ziza njengoko iSeychelles idlulisa iindwendwe zayo zokuqala ezingama-50,000 76 ukusukela kwisigaba sokugqibela sokuvulwa kwayo kwakhona kwihlabathi, nabakhenkethi babala ipesenti enkulu yabakhweli abangama-50. Ukusukela ekuvuleni kwakhona imida yayo, amanani abatyeleli anyuse ukubuyela kwiipesenti ezingama-XNUMX zamanqanaba angaphambi kwe-COVID.
Ngaphandle koxinzelelo lobhubhane, Seytshels iye yazomeleza kwakhona njengekomkhulu lomtshato kuLwandlekazi lwaseIndiya. Idatha yabahambi ebanjiwe ngenkqubo yokuGunyazisa i-Seychelles Islands Travel ibonisa ii-honeymooners ezingama-3,852 ezifika kunxweme lwayo kwezi nyanga zintathu zidlulileyo. Kwezi, abantu abasandul 'ukutshata kwa-Israyeli baphuma phambili kunye nezibini ezingama-3 ezazindwendwela ezi ziqithi, zilandelwa kufutshane yi-Saudi Arabia (413) kunye ne-UAE (229). Ngexesha elifanayo, iSeychelles yayikwayindawo ekhethiweyo kwimitshato engama-208 (abantu abayi-570).
Ngomzi mveliso wokhenketho kwihlabathi liphela ujongene nexesha elinzima, indawo ekuyiwa kuyo ngeholide, indlela yokubaleka edumileyo edume ngamanxweme ayo amhlophe, anesantiAmanzi afudumeleyo afudumeleyo kunye neentyatyambo ezahlukeneyo kunye nezilwanyana zibona inani lokufika kwawo linyuka yonke imihla ukusukela oko lavulwa kwakhona nge-25 ka-Matshi 2021. Ukutyelelwa okuphakathi eSeychelles ziintsuku ezili-11, ixesha eloneleyo lokonwabela ngokupheleleyo amava endawo.
Ukusebenza ukuqinisekisa ukuba i-Seychelles ihlala iyindawo ekhuselekileyo ye-COVID, esisindululo esisandula ukwenziwa seSychelles Islands Travel, esigunyaziswe yiTravizory, sivumela urhulumente ukuba abeke eskrinini kwaye avume abakhweli ngaphambi kokufika- kubandakanya ukuqinisekiswa kweemvavanyo ze-PCR kunye nezatifikethi zokugonya.
Inkqubo yokugunyazwa ithatha nje imizuzu emi-5 ukugqiba kwaye iqinisekisa uxolo lwengqondo kubakhenkethi abafuna ukubaleka ngexesha lobhubhane. Ukuthatha uqikelelo kukhenketho Iziqithi zeSeychelles zokuHamba kugunyazise ilizwe lesiqithi ukuba liphinde livule ngokukhuselekileyo nangokuthembekileyo.
Ngothintelo lokuhamba olukhoyo kwiimarike zalo zemveli zaseYurophu, iSeychelles ivule imida yayo ukuba ibambe amazwe amaninzi kwaye irekhode amanani afanelekileyo okufika avela kumazwe afana ne-United Arab Emirates (i-UAE), i-Israel, iJamani neUkraine Isiqingatha sokuqala sonyaka.
Ngabakhenkethi abamalunga ne-10,000 XNUMX baseRussia abangena ngaselunxwemeni lwesi siqithi, kulindeleke ukuba amanani anyuke ngokukhawuleza xa amanye amazwe aseYurophu eyekisa ukuthintelwa kwawo.
I-Seychelles ngokuqinisekileyo ilindele iintsuku eziqaqambileyo njengoko ukubakho kweenqwelomoya ezivela eYurophu, ikhaya elineemarike eziphambili, zonyuka ukusuka ngoJulayi ngokufika kukaEdelweiss kunye neCondor kunye neAir France ukubuyela kwindawo ekuya kuqatshelwa kuyo ngo-Okthobha u-2021.
UNkosazana Sherin Francis, uSosiba oyiNtloko wezoKhenketho, uthe: “Silindele iintsuku ezingcono zeli shishini, indlela yokubhukisha yangoku ibonisa uqikelelo esilwenzileyo ekuqaleni konyaka. Iirekhodi zibonisa ukuba iSeychelles inokufumana ngaphezulu kwe-149,000 ngo-Disemba ka-2021, ethi yona ibe yindaba elungileyo. Siqinisekile ukuba njengokuba ugonyo luqhubeka kumazwe ahlukeneyo, ukuzithemba kwabathengi kuyakwanda kwaye oku kuyakuba nefuthe kwinani lethu lokufika unyaka wonke. ”
Umnumzana Alan Renaud, uNobhala oyiNqununu wezoPhapho lwaBantu, uthe: “Ukumakisha abahambi abangama-50,000 2019 oko kwasungulwa iNkqubo yokuGunyazisa uKhenketho sisiganeko esibalulekileyo kwimbali yaseSeychelles, kwaye ukwenza njalo ngexesha lobhubhane kububungqina bobulumko bokujolisa kwethu kubathengi kunye nokukhetha kwitekhnoloji. Ukuba sifikelele kwisiqingatha samanqanaba okhenketho ngo-XNUMX kwiiveki nje ezintandathu okoko kumiliselwe kuqinisekisa ukomelela nomtsalane wendawo esiya kuyo. Sijonge phambili, sizakuqhubeka nokutyala imali kumava okuhamba ukuze siququzelele ukhenketho, sibonakalise izinto ezintsha zetekhnoloji ukubonelela ngamanqanaba angenakuthelekiswa nanto kwimveliso kunye nokugqwesa kwenkonzo. ”